ဘာလုပ်မှာလဲ ဘယ်လိုရပ်တည်မှာလဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ဘာလုပ်မှာလဲ ဘယ်လိုရပ်တည်မှာလဲ
Posted by လင်းဝေ on Nov 18, 2010 in News | 8 comments
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာ မြန်မာလူထုအတွက်တော့ သာမန်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာထက် ယုံကြည်ကိုးစားမှုတွေ အလွန်ကိုမှ ထားခံရတဲ့ သူနဲ့ပတ်သက်လာရင်စိတ်လှုပ်ရှားခံစားပြီး မျက်ရည်လည်လောက်အောင်တောင် သူ့အပေါ်ယုံကြည်ကိုးစားခံရတဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကလည်း အစွဲကြီးပြီး ဒါဆိုရင် ဒါပဲဆိုတဲ့လူစားမျိုးကိုး။
မြန်မာပြည်ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက် သူ့ကို အဲဒီလိုကိုးစားမှုတွေအပြင် သူ့ရဲ့ အရည်အချင်းများကလည်း အထူးကို အထောက်အကူပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူမရှိရင် ဘာမှ လုပ်မရလောက်အောင်ကိုရေစုန်မျောသွားပါလိမ့်မယ်။ သူ သည်သာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ တိုးတက်ရေးအတွက် တစ်ခုတည်းသော မျှော်လင့်ချက်ကြီးသာဖြစ်ပါတယ်။သူသာ ကတိမ်းကပါးဖြစ်ခဲ့မယ်၊ သူသာ ထပ်ပြီး စစ်တပ်နဲ့ ကတောက်ကဆထပ်ဖြစ်ပြီး အထဲပြန်ဝင်လို့ ဘာမှ မလုပ်နိုင်ပဲ အချိန်တွေကုန်ရမယ်ဆိုရင် တိုင်းပြည်ဟာ တော်တော်ကို နာပါတော့မယ်။ သူ့အတွက်လည်း အချိန်ကသိပ်မရှိတော့ပါ။ သူအရင်လို မငယ်တော့ပါဘူး။ အမေ က မငယ်တော့ဘူးနော် လို့ သားသမီးတွေက သတိပေး ရမယ့် အရွယ်ရောက်နေပါပြီ။
သူ့ကိုသာ မျှော်လင့်စရာလို့ ပြတ်ပြတ်သားသားမြင်လာရလေ သူ့လုံခြုံရေးအပြင် သူ့လုပ်ရပ်တွေ အတွက်လည်း အများကြီးစိုးရိမ် နေမိတော့တယ်။
သူ့ကို လမ်းပေါ်ထွက်လို့ လူအုပ်ကြားထဲမသွားစေချင်သေးဘူး။ အခုလောလောဆယ်။ သူနဲ့လူထုဟာတစ်သားတည်းဖြစ်နေပြီးသား။ သူအခုအချိန်မှာလည်း လူထုကို သင်ကြားပေးစရာတွေကို ခဏရပ်လို့ စစ်တပ်နဲ့ အပေးအယူလုပ်သင့်တယ်လို့ပဲထင်မိတယ်။ အပြုသဘောဆန်ဆန် ချဉ်းကပ်မှုတွေနဲ့ ကောင်းတဲ့ဘက်ကို ဦးတည်ပြီး နည်းနည်းချင်းရွေ့ဖို့ ကြိုးစာကြရမယ်။ လူထုကို ဘာလုပ်နေတယ်၊ ဘယ်လိုစိတ်ထားရမယ်၊ ဘယ်လိုမျှော်လင့်ပါ စသည်ဖြင့် အသိပေးချင်ရင်တောင် လူထုကို ထွက်ပြီးစကားပြောတာထက် လူထုဆီရောက်မယ့် လမ်းကြောင်းတွေက အခုဆိုပိုတောင်များလာပါပြီ။ လမ်းမပေါ်မှာလုပ်တဲ့ ဟောပြောပွဲကိုတက်တဲ့ လူဦးရေထက်ပိုပြီး ပျံ့နှံ့အောင်လုပ်ပေးနေနိုင်ပါပြီ။ ဒီလိုအားဖြင့် သူလည်း အလုပ်တွေပိုလုပ်နိုင်ပြီး သူများမျက်စိနောက်တာလည်းသက်သာမယ်ထင်ပါတယ်။ စစ်တပ်က အလကားနေရင်း ကြောက်ပြီး မနာလိုနေတော့ လမ်းပေါ်မှာလူတွေ ရုန်းရုန်းဆိုရင် သိပ်မကြည်ချင်ဘူး။ လန့်တာကလည်းပါတာပေါ့။
သူတို့ကို ဗျင်းမယ်ပဲထင်ပြီး ယုံကြည်မှုတွေ တည်ဆောက်လို့လည်းမရဖြစ်မှာပါ။ နောက်လမ်းတွေပေါ်သိပ်မထွက် လူကြားထဲသိပ်မဝင်ရင် အခုလူတိုင်းလန့်နေတဲ့ သူ့လုံခြုံရေးကို ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါပဲ။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ သူ့ကို ဘယ်လိုမှ အထဲပြန်မဝင်စေချင်ပါဘူး။ သူပြန်ဝင်ရင် အားလုံးအတွက်ဘာမှ မဖြစ်နိုင်သလို သူ့အတွက်လည်း ဘာမှ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ အခုလောလောဆယ် ထကြွလာတဲ့ ရောဂါဖြစ်သော ဒုတိယ ပင်လုံညီလာခံဆိုတာကြီးကို လက်ခံသလိုလိုပြောနေတော့ အလွန်ကိုမှပဲ စိုးရိမ်မိတော့တယ်။ ဘာမှ အရာမထင်မယ့်အရာကြီးအတွက် ဘာဖြစ်လို့ စွန်းစားချင်ရပြန်တာတုန်းလို့လည်း တွေးနေမိတော့တယ်။ ဒါကြီးက အခုလုပ်ရမှာမဟုတ်သေးဘူးလို့ထင်တယ်။ ဘယ်လိုပြောရမလဲ သိန်းထီပေါက်ရင် ဘာလုပ်မလဲလို့ စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ဖို့ ညီလာခံခေါ်နေသလိုဖြစ်နေတယ်။ တစ်ဖက်မှာတော့ စကားလုံးတွေကို အင်မတန်အဓိပ္ပါယ်ကောက်ပြီး အကြောက်ကြီးတဲ့ စစ်တပ်က ဒီအသုံးအနှုန်းတွေကို လုံးဝ မကြားလိုတာပါ။ စစ်တပ်ဟာ သူ့အကြောက်တရားနဲ့သူပြန်ပတ်ပြီး အန္တရယ်ရှိမယ်ထင်သမျှအားလုံးကို တတ်နိုင်သမျှ ချေမှုန်းမှာပါ။ စစ်တပ်ကို ပင်လုံညီလာခံခေါ်မယ်ဆိုပြီး ဖယ်ဒရယ်မူတွေသွားအသံပေးနေတာဟာ သူတို့ကို ရှုပ်ထွေးအောင်သွားလုပ်ပေးနေသလိုဖြစ်နေတယ်။ စစ်တပ်ကကြောက်တာရယ် ဥာဏ်မမှီတာရယ်နဲ့ လုံးချာလည်လိုက်နေတာကို သွားရှုပ်လိုက်ရင် တစ်ခါအထုပ်ကိုပြန်ဖြည်ပြီး ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့ပိုပြီးခက်လာမယ်။
အဲသလိုဆိုရင် အားလုံးလိုချင်သော အနေအထားက ဝေးသထက်ဝေးမယ်။
ရှင်းရှင်းပြောရရင် ကိုယ်က အနေချောင်အစားချောင်ပါသော်လည်း လူများစုကြီး ဒုက္ခရောက်နေတာကိုကောင်းကောင်းသိနေတဲ့အတွက် အပြုသဘော အပေးအယူ ညှိနှိုင်းမှုဖြင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ အမြန်ဆုံးလုပ်ဖြစ်ပြီး လူထုက အကျိုးခံစားရတာ၊ လူထုက လုံခြုံစွာ စိတ်အေးလက်အေး လုပ်ကိုင်စားသောက်လို့ ဘဝတွေ ကလေးတွေ အာမခံချက်ရှိရှိနေထိုင် ရှင်သန်နေရတာကို အမြန်ဆုံးမြင်ချင်လှပါပြီ။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးအများစုဟာ အစွဲအလမ်းကြီးသူများပါတယ်။အစွဲအလမ်းကြီးသလောက်လဲ ခေါင်းမာတတ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်မှုမှာ လူထုက အစွဲအလမ်းနဲ့ကိုးကွယ်မှုကို ပိုပြီးဦးစားပေနေသေးတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာ စိတ်ခံစားမှုနဲ့ အစွဲအလမ်းနောက်ကို လိုက်ကြသူများထုံးစံ ဆင်ခြင်မှုကို တစ်ခါတစ်ရံ မျက်ကွယ်ပြုတတ်ကြပါတယ်။
အခုတစ်ခေါက်တော့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ အထဲကို ပြန်မရောက်စေလိုပါ။ လက်တွေ့ဆန်စွာနဲ့ အပြုသဘောချဉ်းကပ်မှုတွေလုပ်နိုင်ပါစေ။
အပြင်ကလူတွေ အတွင်းကလူတွေ အားလုံးလဲ လက်တွေ့ဆန်ဆန် စဉ်းစားပြီး အပြုသဘောဆောင်လို့ ပူးပေါင်းဆောက်ရွက်နိုင်မှုကို လုပ်နိုင်ကြပါစေ။
စစ်တပ်ကိုမုန်းပြီး ဘုကလန့်တွေလျှောက်လုပ်နေလို့တော့ ဘာမှဖြစ်မလာပါဘူး။
အိုင်ဒီယာလေးက တော့ သိပ်မဆိုးလှပါဘူး .. ဒါပေမဲ့ လူတွေမှာ ရှိနေတဲ့ ခံစားမှုအနာတရတွေ ပျောက်နေမှ လုပ်လိုရမယ်..အချိန်ယူရလိမ့်မယ်.လို့ထင်တယ်.. စစ်တပ်ကရော ဆွေးနွေးတာ လက်ခံမှာလား….ဥာဏ်မမှီဘူးဆိုတော့ .. ညိုနှိုင်းလို့ရော ရနိုင်သလား..သူတို့ကို အမြဲတန်း လှုပ်ပေးနေဘို့လိုတယ်..
စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကင်မရာရှေ့မှာသိက္ခာမဲ့စွာနဲ့ ကရင်ဖထီးကြီးများကိုသူတို့ရဲ့နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့အစီအစဉ်များဟာဒီကမ္ဘာမှာတရားအမျှတဆုံး ကြမ်းပိုးလိပ်ဖြစ်မတပ်၊တယောက်ပြီးတယောက်ဖိပြီးတော့သာပြောဆိုနေတာဘဲ။ ဖထီးကြီးတို့မှာပြောခွင့်မသာတာရော၊ပြောလဲနားမထောင်တာရောနဲ့ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့
တနိုင်ငံလုံးရှေ့မှာအနိုင်ကျင့်စော်ကားပွဲဘဲ။ ဘယ်မှာလဲညှိနိုင်းဆွေးနွေးပွဲ။ အိဓ်ိပ္ပါယ်နားမလည်တာလား၊ လူရိုင်းများဖြစ်နေလို့ဘဲလား။
ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာတော့သူ့တပည့်များမှာရင်တထိပ်ထိပ်နဲ့ပေါ့။မနိုင်ရင်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းဘို့လဲအသံဟစ်ထားသေးတာ။အာဏာစိမ်းမယ်ဆိုတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်အသစ်စက်စက်-အဟောင်းကြီးကလဲမောင်သန်းရွှေဘဲလေ။သူအာဏာသိမ်းတော့အဖမ်းခံရမယ့်နံပါတ်၁က သိန်းစိန်ပေါ့။ တပ်ချုပ်ကြီးရှုံးရင်ဝရုန်းသုန်းကားဖြစ်မှာစိုးရိမ်တော
စစ်တပ်က အမေစု ကို စိတ်သဘောထားပျော့ပြောင်း ပီး လိုလိုလားလားလွှတ်ပေးလိုက်တာမှမဟုတ်တာ
အမေစုက သူ ရှိသည်ဖြစ်စေ မရှိသည်ဖြစ်စေ လူတိုင်း တော်လှန်ရဲအောင် နိုင်ငံရေး ဆိုတာကိုမကြောက်အောင်
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဦးဆောင်ရဲအောင် မျိုးစေ့ချပေးခဲ့မှ စစ်အစိုးရက သူ့ကို အိမ်ထဲပြန်ထည့်လဲ တော်လှန်ရေးကြီးအရှိန်မသေဘူးလေ
စစ်အစိုးရရဲ့ ဝေ.လည်ကြောင်ပတ်တွေနဲ့ အချိန် ဖြုန်း မလား
အသိညဏ် မရှိတဲ့ ငမိုက်သားလက်တဆုပ် ကို စာရင်းထဲကဖယ်ပြီး
တပ်မတော်သားတွေ ရဟန်းရှင်လူ ကျောင်းသားတွေ ရဲ့ အိပ်ပျော်နေတဲ့ အသိစိတ်တွေကိုနှိုးပြီးရဲဆေးတင်ပေး မှ ပန်းတိုင်မြန်မြန်ရောက်မှာပေါ့
လူတွေကိုမကြောက်တတ်အောင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်ချက်ရှိအောင် သွန်သင်နေတဲ့သူက ဟိုဟာကြောက်လို့ ဟိုမသွားရဲလို့ ဟိုဟာမယုံရဲလို့ ဆိုတာမျိုးလုပ်နေလို့ဖြစ်မလား ပြည့်သူ့ခေါင်းဆောင်လေ
ကိုယ် တန်ဖိုးထားတဲ့အရာ မဆုံးရှုံးအောင် ကာကွယ်ရမှာကိုယ့်တာဝန်
ဘာလုပ်မှာလဲ ဘယ်လိုရပ်တည်မှာလဲ ဆိုတော့
ကိုယ့်ခြေထောတ်ပေါ်ကိုယ်ရပ်ပြီး အမေ သင်ပေးတာလုပ်မယ်
မှတ်ချက် : စာလုံးပေါင်းနှင့်စကား အပြောဆို မှားက ဗွေမယူရ
(၁) တစ်ဆင့်စကား ပြောသံကြားကာမျှကို ဟုတ်ပြီမှန်ပြီဟု ချက်ချင်းအတည် မယူလေနှင့်၊ လက်မခံကြလေနှင့် (မာအနုဿဝေန)
(၂) ရိုးလာအစဉ်အလာနှင့် ကိုက်ညီသောစကားဖြစ်၍လည်း ဟုတ်ပြီမှန်ပြီဟု ချက်ချင်းအတည် မယူကြလေနှင့် (မာပရမ္မရာယ)
(၃) ရှေးကဒီလို ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတဲ့ (ထုံးရှိ၍လည်း) ဟုတ်ပြီမှန်ပြီဟု ချက်ချင်းအတည် မယူလေနှင့် (မာဣတိကိရာယ)
(၄) ပိဋက (စာပေ) နှင့် (ကျမ်းဂန်နှင့်) ကိုက်ညီတယ်ဆိုပြီးတော့လည်း ဟုတ်ပြီမှန်ပြီဟု ချက်ချင်းမယူလေနှင့် (မာပိဋက သမ္ပဒါနေန)
(၅) မိမိကိုယ်တိုင် တွေးကြံနိုင်ရုံ မျှနှင့်လည်း (ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်ညီသည် ယုတ္တိရှိသည် ဆိုပြီး) ဟုတ်ပြီမှန်ပြီဟု ချက်ချင်းအတည် မယူလေနှင့်ဦး (မာတက္က ဟေတု)
(၆) နည်းမှီရယူရုံဖြင့်လည်း ဟုတ်ပြီမှန်ပြီဟု ချက်ချင်းအတည် မယူလေနှင့်ဦး (မာနယ ဟေတု)
(၇) အခြင်းအရာကို ကြံစည် စိတ်ကူပြီး (သဘောကျရုံဖြင့်) လည်း ဟုတ်ပြီမှန်ပြီဟု ချက်ချင်း အတည် မယူနှင့် (မဆုံးဖြတ်နှင့်ဦး) (မာအာကာရ ပရိဝိတက္ကေန)
(၈) ငါတို့သဘောကျ လက်ခံထားတဲ့ အယူဝါဒနှင့် ကိုက်ညီတယ်ဆိုပြီးတော့လည်း ဟုတ်ပြီမှန်ပြီဟု ချက်ချင်းအတည် မယူနှင့် (မဆုံးဖြတ်နှင့်ဦး) (မာဒိဌိနိဇ္ဈာန ခန္တိယာ)
(၉) မှတ်ထိုက်ယူထိုက် လက်ခံထိုက်တဲ့ သဘောပဲဆိုပြီးတော့လည်း ဟုတ်ပြီမှန်ပြီလို့ ချက်ချင်အတည်မယူလေနှင့် (မဆုံးဖြတ်နှင့်ဦး) (မာဘဗ္ဗရူပ ပတာယ)
(၁၀) ငါတို့လေးစားတဲ့ ရဟန်းရဲ့စကားဆိုပြီးတော့လည်း ဟုတ်ပြီမှန်ပြီလို့ ချက်ချင်းအတည် မယူနှင့် (မာသမဏော နော ဂရုတိ)-
ဟူ၍ ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား ကဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။
ိနိုင်ငံနှ့င့် လူမျိုးတိုးတက်ဖို့ နေရာတိုင်းမှာ မှန်ကန်စွာ ကျင့်ကြံဖို့ လိုပါတယ်။ဒေါ်စုကြည်။
ယနေ့တပ်မတော်အစိုးရရဲ့ အုပ်ချုပ်မှု အချိန်ကာလ အတွင်းမှာ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာပြီး ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှု ရရှိနေတဲ့
အပိုင်းတွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်။ဒါတွေကို လက်ခံရပါမယ်။
ိထိုနည်းအတူ အားနဲတာလည်း ရှိပါမယ်။ ဒါကိုလည်း အြ့ပုသဘောနဲ့ အကြံပေးပါ။ ဒါမှ အဖက်ဖက်ကပြည့်စုံပြီးတိုးတက်မှာပါ။
တပ်မတော်က အုပ်ချူပ်လာတဲ့ နှစ်ပေါင်း၅၀ ကျော်မှာ ဘာတွေများတိုးတက်လာသလဲ ပြောပြပေးပါ….အရင်ခေတ်နဲ့ အခုခေတ်ကို နှိုင်းယှဉ်တာထက်…. မိမိနိုင်ငံနဲ့ ထိစပ်နေတဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ့လား…. အနီးစပ်ဆုံ ပြောပြရရင် မြန်မာပြည်ထက် နောက်ကျပြီးမှ လွတ်လပ်ရေးရလာတဲ့ ဗီယက်နမ်ကို ပဲ ကြည့်ပါ…. မြန်မာပြည်ထက် သာနေပြီဆိုတာတော့ katootpe ရော တပ်မတော်ပါ လက်ခံရမှာပါ…. ဘယ်နိုင်ငံပဲကြည့်ကြည့် စစ်တပ်က အုပ်ချူပ်နေတဲ့ တိုင်းပြည်ဟာ…ဘယ်တော့မှ တိုးတက်လာရိုး မရှိတာတော့အမှန်ပါ…
“ဘာလုပ်မှာလဲပြော မင်းမကြိုက်ရင် လာမရှုပ်ပါနဲ့တော့…ငါတို့က ရှေ့ဆက်လျှောက်ဖို့ ” …. အဲခေါင်းစဉ်အစလေးဖတ်ပြီး သတိလွတ်သွားတာပါ ။